15th Aug 2020 7:43:42 AM
Etshiswe watshintsha xa kwakuhlaselwa ngeasidi phofu kungajoliswe kuye, uEvelyne Minto Essono noko uyalufumana ukhuthazo ukuze le nkulungwane intsha agagane nayo ephila ngokutsha Ñ ngenxa yobubele babantu angabazi kubalisa uBRONWEN JONES
ICAWA YOWE-18 NGO-OKTHOBA uEvelyne Minto Essono yimini angasoze ayilibale Ñ iluphawu nasebusweni bakhe. Kwakungo-1998 xa wahlaselwa ngeasidi kwathi kanti bahlasela umntu ebebengamele. Le asidi yaxobula ulusu entloko, esifubeni nasezingalweni, imshiya ebukeka kakubi. Ngoku uEvelyne onama-25 wayefudula eyinzwakazi elangazelela ukuba azuze imali ukuze ancede umnakwabo nabasakwabo bafunde bagqibe aze ngenye imini atshate abe nabantwana. Ubehlala eLibreville ikomkhulu leGabon embindini weAfrika. Nakuba eqale ukufunda ene-10 leminyaka noko wakwazi ukuyipasa ibaccalaureat yakwelo ekuyiMatriki apha eMzantsi Afrika. Ngeeholide nangeempelaveki uEvelyne ubeyireceptionist kwiAfrica No 1 nekusesona sikhululo sosasazo sihlonitshwayo kwelo. Uzalwe kusapho olukhulu olonwabileyo nakuba bobabini abazali bakhe basweleka, abantwana oomakazi noomalume bayabambisana ekuncedisaneni.
Uthe utata kaEvelyne akusweleka waya kuhlala kunye nomakazi wakhe uHuguette Ndzigue kwifleti enegumbi lokulala elinye ekwihlomela-dolophu laseSotega, umfundi weaccountancy ne-English eyunivesiti nomdala ngeminyaka nje emibini kunaye. Le flethi iyenye yeeflethi ezine kwesisezantsi kwesi sakhiwo. Inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi kunye nendawo yokuhlamba. Kwelinye icala elinabamelwane bakhe ngamadoda kuphela aminyaka ekuma-40. Kwelinye icala linenekazi elinama-20 eminyaka kunye nomsakwalo okwishumi leminyaka elivisayo. Kufutshane nabo linenekazi elihlala lodwa elinguRosette.
UEvelyne ubebabulisa abamelwane bakhe kodwa engabazi kuba usoloko exakekile ephangela, efunda, esiya enkonzweni ekwatyelela nosapho lwakhe. Ubenesinqanda mathe sakhe kodwa engaziphathi okukamakazi wakhe uHuguette. UHuguette ebethandana ithuba elide nendoda etshatileyo uLouis-Martin Ñ kukuziphatha kakubi kwale ndoda okwabangela iziva ebomini bukaEvelyne.
Ngaloo mini yelishwa echazwe ekuqaleni kwenqaku uEvelyne wemka kowabo ngeye-9 kusasa esiya ecaweni. UHuguette akazange aye, uthe udiniwe. Ithe yakuphuma icawa uEvelyne watyelela obeluncedo kuye uSamuel Obame Zogho nentombi yakhe ngelantshi. Emva koko waphangela waya kwisikhululo sosasazo ngeye-3 emva kwemini waza wafika kowabo ephuma emsebenzini malunga neye-8:30 ngokuhlwa. Apha ngaphandle kule flethi kwakumnyama negama lesitalato lingabhalwanga, ukanti sincinci. Xa usiya kule flethi zimbini iindlela onokuzisebenzisa. UEvelyne wahamba engenaxhala kanti ke neSotega ayinabungozi.
UHuguette wayengekho, uEvelyne watya isopholo, wakhulula iimpahla ebephangele ngazo. Ubediniwe nanjengoko ubusuku kuloo mmandla wenjiko-langa buthanda ukuba shushu wayokulala enxibe nje impahla yakhe yangaphantsi kuphela. UEvelyne wakhawuleza walala kodwa ethubeni wavuswa kukuva kunkqonkqozwa, wabhinqa nje itawuli, wabuza esithi, ÒNgubani lowo?Ó Bekumalunga neye-10 ngokuhlwa. Uve ilizwi likaLouis-Martin Wora Ñ isinqanda-mathe sikaHuguette abethandana naso kwiminyaka emine okanye emihlanu.
Eneminyaka ema-40 ebengumphathi kwisebe locwangciso lukarhulumente. Inkosikazi yakhe nabantwana babo babehlala kwihlomela dolophu ekuthiwa yiGlass. UEvelyne ubemazi kakuhle uLouis-Martin kube ebethandana noHuguette kodwa ubengazi ukuba inkosikazi yakhe iyazi okuqhubekayo. Nakuba uEvelyne engazange ayigxeke le ndlela baziphethe ngayo wayengakholelwa kwelokuba bekufuneka athethe ngayo.
Eqonga ilizwi lakhe, uvule ucango kwangena uLouis-Matin. Ubephelekwa ngumhlobo wakhe naye oyindoda nangazange wambona ngaphambili kunye nomnakwabo. Babemphathele iibhanana uHuguette. UEvelyne ubuzile ukuba uLouis-Martin angathanda ukulinda de abuye kusini na umakazi wakhe, kodwa lo mfo uphendule wathi akanako uza kubuya ngengomso. UEvelyne ubuyele ezingubeni.
Apha kufutshane kukho nezinye iiflethi nazo ziziindidi ezine. Kulula ukubona umnyango ongaphambili wakuloEvelyne xa uhleli kuzo. Nenekazi lithile eliminyaka ekuma-20 nelinguHermine lihlala kwenye iflrthi nesinqanda-mathe salo, likrobile ngaphandle labona inenekazi elithwele iqhiya linika inkwenkwana ikhonteyina yeplastiki.
Ngelo xesha akazange acinge nto kodwa iintsuku kamva uHermine nomnye ummelwane uMeme bayibona le khonteyina kwiflethi ahlala kuyo uEvelyne. Babona uHuguette elahla le khonteyina netawuli ekrazukileyo. Imizuzu emihlanu sehambile uLouis-Martin namaqabane akhe kwankqonkqozwa kwakhona apho ahlala khona uEvelyne. Yena wacinga fanÕ ukuba nguLouis-Martin Ñ mhlawumbi kumelÕ ukuba kukho nto ayilibeleyo. Wavula nje ucango engabuzanga ukuba ngubani. Kwakungasekho thuba lakuvala umnyango ukuzikhusela kuba inkwenkwana yayiphosa kuye le khonteyina yeplastiki enokubumanzi. Le nkwenkana inxibe umnqwazi obukhanya enomphetho ophendulweyo. YayingangoEvelyne inde kangange-1,54 mitha, mhlawumbi ingaphezulwana nje kancinci kunaye.
Le asidi yamtshiza ebusweni, esifubeni nasezingalweni. Amathontsi ayo athontsiza emqolo nasemilenzeni. Zisuka nje waqaqanjelwa, wagodola kakhulu. UEvelyne akazange adibane nale nkwenkwana ngaphambili ukanti akazange aphinde ayibone. Akayazi, kunokwenzeka nayo yatshizwa yile asidi.
Yabaleka le nkwenkwana noEvelyne wakhala ecelÕ uncedo. Waya kwenye iflethi efuna uncedo kodwa omnye umfo owaphendula wakroba nje waluvalÕ ucango. UEvelyne uthi kunokwenzeka yathuka kuba wayehamba zŽ, okanye isiva ivumba lesikhumba elalinuka. Wankqonkqoza kwiminyanga ngeminyango kodwa kunani ukuba ancedwe. Waqhubeka ekhala efuna uncedo.
Ngelingeni nenekazi lithile ekuthiwa nguNadege leza lisuka kwisitrato esingekude kangako. Lamgalela amanzi uEvelyne kodwa loo asidi yayisele imenzakalisile. Labiza iteksi ibalekisele uEvelyne eCentral Hospital. UHuguette wafika wahamba nabo ngeteksi. UEvelyne walala esibhedlele ukusuka ngoOkthoba de kwangoFebruwari kunyaka olandelayo. Ndidibene naye apho.
EMzantsi Afrika ndichithe ixesha lam elininzi ndizama ukuthintela iingozi zokutsha okanye ndinceda amaxhoba okutsha kodwa nakuba ndiye eGabon ndiyokubhala ngemithi ndikhe ndanexesha lokuphola, ndibuze abantu balapho ngabantwana abatshileyo. Ukuncokola nonoteksi osuka kwelinye ilizwe kwandisa kuCoulibaly Soungalo, ityendyana elingunogada nelikhe lafundela ukuba ligqwetha. Ukhawuleze waqonda ukunxanelwa kwam inkcazelo waza wazimisela ukundinceda njengetoliki.
Zonke izibhedlele zikarhulumente zaziqhankqalazile iinyanga ezine kodwa abantu bandixelela ngenenekazi elithile elitshe phambi kokuba kuqale uqhankqalazo nelalisesibhedlele. UEvelyne ndiqale ukumbona apho.
Ulele apho kwisibhedlele esingenabasebenzi, egcuma ziintlungu namanxeba akhe engabotshwanga ngamabande. Igumbi lingcolile noEvelyne kufuneka eze namashiti neengubo zakhe ukuze ahlale apho. Ndakhangela eli nenekazi litshe kakubi linama-24 eminyaka nendandingazi ukuba lakhe layinzwakazi xa ndabona iifoto zalo. Ndabuza ugqirha ukuba baza kulithini, ephendula uthe: ÒAkukho nto singayenza.
Ó EGabon akukho nogqirha nje oyedwa oyiplastic surgeon. Ukuba kwenzekile watsha kakubi kofuneka uphile ubomi bakho nezo ziva zibi. Abantu abangamahlwempu abanakufane baphile kuba iindlela ezimbi nezithuthi ezingafanele kuqhutywa ezindleleni azinakufane zifike ezibhedlele kwangethuba.
UEvelyne ukwazile ukusinda kodwa ndithe ndakudibana naye wabe ephelelwe lithemba. Ingalo yakhe yashwabana yaqina ngenxa yokutshiswa yiasidi. Uhle nge-20 kilogram. Nogqirha uthe kunganzima ukuba alishukumise iliso lakhe lasekhohlo ukanti akanabugcisa okanye iindlela zokubuyisa ukhozo lweliso lakhe elonakeleyo. Liza kuhlala lithe gongxo kuba kunzima nkqu nokufumana iindodo zamehlo eGabon.
Eli lizwe linoovimba beoyile abazisa intywenka yemali likwanezinye izimbiwa. Linamahlathi amakhulu amaplanga amakhulu. UMongameli Omar Bongo uhlala kwipomakazi elihle. Kodwa akukho luncedo lufumanekayo lokunyanga uEvelyne.
Ndicele ugqirha ukuba ingadla yakhe ayibambe ndiza kubona ukuba lukho kusini na uncedo endingalwenza. Ngokuthi krwaqu nje kanye ndaqonda ukuba kukho okunokwenziwa ukusindisa iliso likaEvelyne kuba ngaphambili ndikhe ndanceda umntwana owayetshe kakubi. Kodwa ndandingazi ukuba imali yotyando ndiza kuyifumana phi, yeka indlela ekunzima ngayo ukufumana abasemagunyeni xa bebonke. Ndintingele eMzantsi Afrika ndaza ndalungiselela ukuba uEvelyne atyandwe eNetcare Sunninghil Hospital. Ukuze uEvelyne antingele kweli kubangelwe nguMarysia Dusinski okwiSouth African Embassy eGabon, ukubandakanyeka kukaCoulibaly Soungalo, ongumncedi kwintlangano yoncedo lwesisa yaphesheya nekuthiwa yiMiracles, uncedo oluphuma kwiSizanani Catholic Mission neAir Gabon kwanabanye abantu abaphambili ingakumbi uDavid Astor, uVernon Ching, uMarie Antoinette Perira noJulia Ray.
Aba bantu banokubukeka bengathethi nto kuni bafundi kodwa ngeendlela ezininzi imali yabo nemigudu yabo indikhumbuza umSamariya Olungileyo obhalwe eBhayibhileni. Ngabantu abakulungeleyo ukupha abanako ukuze bancede uthile bengalindele mbuyekezo. Lo mgudu ubukeka ungekazukuphela. Abanye abantu bancede ngonyango emzimbeni emva konyaka. UEvelyne uhlala kumzana wethu. Ukwazile ukubuyela emzimbeni, uqalise ukufunda intenetya nokusebenzisa ixesha lakhe ukuzuza obunye ubugcisa kwikhompyutha, ukuthunga nokufunda isiNgesi.
Kodwa kusafuneka afumane utyando olukhulu nolunzulu ukuze kongulwe ulusu emqolo ukuze kulungiswe umlomo wakhe, isilevu nentamo. ULawrence Chait oyiplastic surgeon eJohannesburg Park Lane Clinic ucebise ukuba impumlo inokukhuliswa okwethutyana kwibunzi likaEvelyne ize ngokuthe ngcembe ibuyiselwe kwindawo yayo. Olo tyando lufuna i-R250 000. Ndiyathemba ukuba abantu abanganceda banokufunyanwa ngandlelÕ ithile kuba mna okwangoku andinayo nesenti le.
UEvelyne uxelelwe ukuba inenekazi elaliceba ukuhlasela yenye yeentokazi zikaLouis-Martin. Siyalazi igama layo sinenkolo yokuba le asidi yayicetyelwe ukutshisa uHuguette, hayi uEvelyne.
Umhlaseli akanakufane aziswe kwingalo yomthetho kuba eGabon akukho ncedo lwasimahla lwezomthetho nkqu nabakuloEvelyne abanamali yakufuna igqwetha. Nkqu naxa sifowunele iGabonese Embassy ePitoli, amagunya apho akabuye akufowunele. Akazange amtyelele esesibhedlele kungasathethwa ke nangokuza oku neentyatyambo.
Abanye abantu abanaluvelwano kuba uEvelyne engenguye owakweli. Kwabanye kungenxa yokuba engumntu omdala. Kodwa cinga nje Ñ ukuba ibindim bendinokuvakalelwa njani? Umsakwethu? Intombi yam? Sinokulwa njani noku kungabi naluvelwano xa singambonisi umhlaseli ukuba kwilizwe esiphila kulo uthando yinto ebaluleke kakhulu kunenzondo?
Xa unokunceda uEvelyne, qhagamshelana naye apha: BRONWEN JONES, ifowuni (011) 726, 6529, nefeksi ikwayile nombolo
Email firechildren@icon.co.za Box 1048, Auckland Park, 2006.
Janyuwari 17 1999.
Ukuthi cakatha kwentombi engenabuso euzweni. Abantu abangaqhelekanga abathi beva ubunzima benkohlakalo engenamdla namvakalelo.
Eli bali laqala kwisithuba seminyaka emine eyadlulayo xa uDorah Mokoena, owayengumntwana ngoko wathi watsha kakubi ngumlilo kumatyotyombe aseBotleng. Ubuso bakhe kwaneengalo zazitshile. Wathi ekugqibeleni wafumana unyango, kwaza kwathi ekuzeni kokuba ndimqonde, walala ngomqolo kwisibhedlele saseSprings, esenkedama.
Kwisithuba seminyaka embalalwa elandelayo, unyana wam omncinci uTristan, umhlobo wakhe uThobeka kunye nam, satyelela uDorah ngeembela veki sadlala kunye naye. Sabona ukuba le ntwanazana ikhubazekileyo ifuna abantwana njengabahlobo bayo nanjengentsika ebomini bayo.
NgeyoMnga wowe-1997 ndaxelelwa ukuba oogqirha babeza kukhupha amehlo kaDorah, kuba babesithi utyhaphakile neendleko zokuwakhupha zaziphakame kakhulu. Kodwa ababedlala kunye naye babeqonda ukuba unako ukubona, nkqu nokuba ukubona kwakhe kwakuluzizi. Ngele kweencoko ezindengeemfono-mfono kwaneentlanganiso nabantu ababezama ukuba ade abone kwelo lizwe lonyango, ndagqiba kwelokuba ndifune uncedo lokusindisa oko kumfameka kwakhe.
Kwathi zakuthi ndii iindaba zikaDorah elizweni, kwavela umbuzo wokuba ngubani oya kumkhathalela ukuba unyango lunokulungiselelwa de ndingalali iingokuhlwa ezininzi. Ndandijongene nowam umntwana kwaye kwakufuneke ndigqibe ekubeni lungakanani na ixesha ekwakufuneke ndiluchithili.
Ebuncinaneni ndagqiba ekubeni ndifumane unina wakhe uMargaret. Ngexesha endathi ndaxelelwa ngalo ukuba uMargaret wayengumthinjana kwaye engenawo nomdla emntwaneni wakhe, ndafumanisa ukuba iinkcukacha ezazigciniwe njengobungqina zazingeyonyani.
Ngoncedo lodidi lokuqala elalivela kumapolisa lezikhululo zaseDelmas naseBotleng, sagqogqa ematyotyombeni de uMargaret wafumaneka. Ibali lakhe lingalingana nencwadi xa linokubaliswa kodwa kwakufuneke emanyene nomntwana wakhe ngo Janyuwari wonyaka ophelileyo. Ngoku basisibini esivana kakhulu.
Andisayi kukholelwa nayiyo nayiphina into ekhaphu-khaphu. Kodwa yonke inkohlakalo, ukuthingaza nokungevisisani kwagqunyelelwa luthando lukaDorah. Kukufudumala kwabangaqhelekanga nabandibhalelayo mbombo zone zomhlaba okundinika inkuthazo yonyaka ozayo. Kukwazeka kokuphela kwethemba ukwenza ukuba kubekho ithemba.
Noko lonyaka uphelileyo ubungaqhelekanga. NgeyoKwindla, kwafuneka ndilungiselele uhambo endingazange ndaluhamba ngaphambili : uhambo olusuka ekunikezeleni ukuya ethembeni, lwaluvakala njengephupha kuba inqontsonqa yayingaqhelekanga. Yayiluhambo oluvela kwimikhwazo yosana njengoko impumlo, amashiyi, imilebe kwaneminwe zazitshile kutyelelo lwethu lokuqala kwibhedi yosana kumathunzi obomi kaDorah kwanemivuyo engephi kwisoyikiso soogqirha sokukhupha amehlo.
Kwibali leli phepha-ndaba nakwiLondon Times, ndacenga ugqirha omkhulu wesithili owayenokufumaneka ukuza kujongana neemfuno ezizodwa zikaDorah kuba oogqirha boMzantsi Afrika babemncamile. Iqela loogqirha lanikezela ngenkonzo yalo kwanengcebiso. Kwiminyaka ezayo, ukulungiselela uqhaqholexa elizayo, singabuyela kubo bonke. UMargaret wabeka intombi yakhe uDorah ebhedini yayo. Ugqirha wamaNgesi wanceda ekunyangeni iintshiyi zika Dorah.
Ngo-Ayipreli, uDorah wahlangana nomyeni wakhe uRichard Collin owayesaziwa ngelikaMnumzana Eyelid ngababesebenza kunye naye, wamxilonga uDorah. UCollin namaqabane akhe kwisibhedlele iMoorfields eLondon, wabona imifanekiso yayingagqunywanga kaDorah eyayinokubangela eyona ntlungu koogqirha. Kodwa babeqonda ukuba ukuba banokuthi bazakhe ngokutsha iintshiyi zikaDorah, ubomi bakhe bungaphucuka ngokugqithisileyo.
UCollin ngoku wabuyisela inkangeleko yangaphandle yemisebe eyayinjengomngxuma ukuze uDorah abe nokufumana amandla. Wasindisa ukubona kwakhe. Kweye Khala, uqhaqho luya kwenziwa ukuze abe namehlo akhe okwenyani.
'Ndiya kwenza isigqibo sobungakanani sobomi endiya kubuchitha'
Imbumbulu yeso eyenziwe bubushushu beso iyakususwa kwiso lakhe lasekunene. Umsetyenzana wokuqala waqala ukudala imilebe yakhe nokumnika isandla sakhe esimncedayo.
Ngexa amagumbi okuqhaqhela ayehlawulelwa umyinge wama £10 000 (mayela 100.000) uqhaqho. Oogqirha bamaNgesi ne-anaesthetists zanikela ngexesha labo kwanobuchwepheshasimahla.
Into eyayimangalisa ngele komsebenzi kaCollin, yayiyeyokokuba, iintsapho nje eBritani zathatha uDorah no Margaret zabasa ngaphakathi, zanikezela ngamakhaya azo kwaneendwendwe ngazo zonke ezo nyanga. Ngeenyanga ezisithoba ezadlulayo, uDorah nonina bahlala eBritani ngexa uDorah wayefumana uqhaqho amaxesha ali-16.
Bahlala neentsapho ezazingamaqabane amadala am okanye abantu ababa ngabahlobo emva kokuba befunde amabali ngoDorah. Ngexa iimfefe zasemaNgesini zathi zabuyisa iindleko zokutya kwiintsapho ezithile, ngoku, uninzi lwanikezela uncedo lwabo ngelize.
Ngaphezu kwekhulu leminyaka eyadlulayo, intwanaza encinane eyayisaziwa ngokuba nguHelen Keller newayeza kuthunyelwa kwisibhedlele sabagula ngengqondo njengemfama, isithulu (ngeloxa njengesimumu) kwakukholeleka ukuba umntwana akanakuncedakala. Abanye abantu benjenjalo nakuDorah, nkqunangoku sekucetyiswa ukuba kuya kuba ngcono ukuba wayebulewe.
Kodwa intshayelelo kaKeller ku-Anne Sullivan, intokazi eyayikrele-krele neyayinobulali, yabutshintoha ubomi buka Helen. Ukusuka koneminyaka esixhenxe owabonakalisa inkohlakalo yebhere esehokweni, apho kwaya kukhula intokazi eselula, neyathi kwisithuba seminyaka engama-22 yabhala yenjenje:
"Xa ndifunda isicatshulwa se-Illiad halo, engqondweni yam ndicinga ngokundingqongileyo ebomini bam. Imiqobo emandla iyalibaleka, ilizwe kum lingumnqantsa, ubude kwanobubanzi kwanezahluko zezulu zezam".
Intshukumo eqhelekileyo kuDorah, evela kubantu abaqhelekileyo jikelele elizweni, indikhumbuza amandla awayikekayo kwanobuntu obuhlala ikakhulu bubopheleleke kwizahlulo eziliqela zabantu. Kukhangeleka ngathi kukho imfuneko engemandla yeminikelo yeCawa kodwa okwexesha lentlawulo yabavangeli, apho abantu babeka incwadi yemizuzu, ngeyure kungenjalo usuku bucala, ukubuyisela uthando kwanokukhathalelana kuluNtu.
Ndafumana mayela nama-2000 eeleta zenkuthazo, izithembiso zomthandazo, imali kungenjalo imigudu emandla. Abantu bandixelela ukuba bamkhalela njani na uDorah kwiinqwelo-moya nakoololiwe. Babhala imihobe ukuba ithengiswe, bazilungiselela neehambo zezibonelelo. Balahla amacwecwe abo eminqweno emihle yeKrismesi, izidlo zabo zeKresmesi.Kwaneehambo zabaqeshwa zolonwabo. Abantu bafunga besithi unotshe kwakhona kwisisulu kodwa beza ngaphambili bathi: "Asinakungamhoyi uDorah."
Iileta zeza zikumaphepha angcangcazelayo nabhalwe ngokungacacanga, amanye ayechwetheziwe, amanye ekwipostcards. Imibhalo-ngqangi yobuntwana neyayimilise okwentliziyo ibhalwe kumaphetshana amancinane aye enomyalezo olula onje: "Uthando oluvela kuJulie."
Babhala ukusuka eCroydon, eCardiff nase Charibury, ukusuka eNorwich naseNorthampton, ukusuka eTaplow naseTaverham. Kwakukho intshukumo evela kuzo iingingqi eBritani. Ukusuka apho kweza imali yaseSpain ikwileta, enye yayivela eGibraltar, France, Canada, kwiPhilippines, Australia, Monaco Switzerland nase-United States. Abanye abemi boMzantsi Afrika bathumela imali kuKent kuba beva ngengulo kaDorah kumabona-kude iSky.
Wonke ubani unesizathi sokubandakanyeka, abanye njengabazali okanye oomakhulu beentsana, beva ngengulo kaDorah, abanye ngenxa yokunxulumana noMzantsi Afrika okanye abanye babengaboni kakuhle. Abanye abantu babandakanyeka kuba babecinga ukuba yinto elungileyo leyo.
Omnye umbhaleli uVicki Green wathi: "Umyeni wam wayenqwenela ukuphumelela isabelo semali ukuze abe nokuyinikezela loo mali enkundleni" UTudor Morgan wabhala: "Intsapho yam iza kuphisa ngobuncinane esinabo kwintwanaza encinane ukuyinika ekufaneleyo. NoDave Adams wathi: "Enkosi kakhulu ngokubonisa ngoDorah kuthi. Umlo oqalwe yilaa ntwanazana iingumzekelo kuthi sonke:"
Umnikelo omncici wawu £2, omkhulu nowawungaziwa nowanikezelwa yibhanka yamaSwiss wawuyi-£5000. Konke oko kwanceda ukwakha uqilima olwenza uqhaqho lukaDorah lokuqala lwaba yimpumelelo.
Iguqulelwe esiXhoseni nguM.A. Ndyamara Ngomhla we- 1999-05-22
Inkonzo yeendaba zebandla lama-Anglikheni.
Intshumayelo ngu-Bhishophu omkhulu u-Carey kwinkonzo yokugqibela eLambethi.
UBhishophu omkhulu wase Canterbury, George Carey. Nje iintsukwana ezimbalwa phambi kokuba inkomfa iqale, iindwendwe ezimbini ezazivela eMzansi Afrika zeza kundibona intwazana eyayikwiminyaka emine, nonina wayo owayeselula. Igama lale ntwanaza nguDorah, kwaye ubudala beenyanga ezisixhenxe, ibobosi awahlala kulo yena nonina, kumabobosi awayekufutshane neRhawuti, latsha. Wavaleleka kulo, ngenxa yoko, ubuso bakhe bonakala; akanamplo-kusele nje umngxuma; akanazindlebe namashiyi, kwaye ubona luzizi. Akanazo nkqu neengalo, kuba zonakala kanga ngokuba kwanyanzeleka ukuba zinqunyulwe. Kodwa uDorah ungumntu nangona engenabuso, Kwaye ngocedo loogqirha, nangothando, uthando oludurhu lukanina namaqabane akhe, ubuso bakhe obutsha buqalisa ukubuyela endaweni yako.
Kodwa okubalulekileyo kuDorah, nakuthi sonke, kukuba senabo ubuso angenakwahlukana nabo; ubuso obazeka kuThixo, obungenachaphaza nobubobakhe kuphela.
Kuziveki ezimbalwa zokugqibela ezintathu, besifunda ngeleta ejikelezayo kaPawulosi, ekumaKorinte esibini. Kuyo, ubuso ngobuso bubalulekile. Indumasi kaMosisi yobuso emva kokuba wadibana noThixo; obethu ubuso obungafihlalakakanga, xa sizinikele kwilizwi likaThixo; ubunganga bukaThixo bubonakala kuthi ngabanye ngabanye, njengoko sibona uKristu kubanye ngabanye bethu; kuze kwisahlako sesine, kuvele umfanekiso kaPawulosi. Kuba uThixo uzibonakalalisile kwiintliziyo zethu ukuba, kufuneka sinikele ngokukhanya kwanolwazi lobungaka bakhe ebusweni bukaYesu Kristu.
Ubuso ngobuso (iimbuso). Esikrinini emva kwam sibone ubuso ngobuso (iimbuso); iimbuso zezithethi, iimbuso zeemvumi, iimbuso zabanye ngabanye njengoko ikhamera yayisifota. Phambi kokuba size apha, sasisazana omnye ngomunye kodwa sasingazani ebusweni. Ngoku sibonene. Ukwenjenjalo, siqalise ukubonana nokwazana ngcono. Sayiqonda neyokuba, emva kobuso ngabunye kukho isithili esiNgcwele esiphansi kukaBhishophu kwanePhondo elikwahlukile.
Leyo yenye nje yeendumasi zentlangano yamaKristu enjengale. Ukuqalq ukubona ukwahluka komnye komnye, ngokwahlukana kwethu, saqalisa kananjalo ukubona into yobunganga bukaThixo ebusweni bukaYesu Kristu komnye komnye. Kananjalo, kubo bonke ubuntu nenkcubeko eyahlukeneyo, kukho laa mfano yobu-Angikheni, yobuKristu, eyobuyntu jikelele nentsukaphi yayo evela kwiziqu ezithathu, kolwaa thando lobuntsapho lweziqu ezithathu zoThixo omnye.
Ibandla lethu lama-Anglikheni amanyeneyo layibhengeza kwakude kudala inkolo yalo yothando lweenkcubeko ezahlukeneyo. Njengoko besilapha sonke, sidibene, laa nkolo yokulunga kweenkcubeko ezahlukeneyo seyide yazisa amandla novuyo kubaninzi, ngokukodwa kwiintlobo ntlobo zonqulo esithe sanazo. Siziqondele thina ngokwethu ukuba, sibaxolise kuyo nayiphina imibuzo enzima "ngochulumanco" Kanti ngokuchasene noko. Njengokuba ingxelo yaseVijiniya isikhumbuza, uThixo umema abantu bakhe ukuba bazonwabise ngokwahlukana kwabo, bakusebenzise ukwahlukana kwabo ingekuko ekungxengeni koko "ekwakheni umzimba." Asimngcipheko wabuhlobo namvumelwano koko kukwahlulkana kwethu okuya kwenza ukuba somelela ukuze sibe nako ukumelana nemibuzo enzima,yona esekeleze kumava ethu enene okudumisa uThixo ebusweni buka Yesu Kristu ,njengoko sesibonile, sibona ngawethu amehlo, phabi kobuso bomnye nomnye. "Ukwahlukana kwethu okumanyeneyo," mandikukhumbuse, ngokumaneka kubunyulu baThixo ngekqu,nowabonakala kuthi ngoYesu Kristu, nangokubhalwe kwauncwadi eziNgcwele zenkozo. Obuya bunganga bunikwe thina khon'ukuze sibe nokubhiyoza nokubhengeza.
Kwaye sibubonile obuya bunganga ngeendlela ngeendlela ezininzi Laa cawa yokuvula imangaliso kwiholo eNgcwele yeBhishopu eCanterbury, kubudlelalwane obuhle kwanokukhululeka komnye komnye ngokukodwa kumaqela ethu amancinane okufunda iBhayibhile, umhla wesandulela noqhutywe kakuhle kakhulu ngumhlobo wethu uJini Vanari, kumabali abuhlungu nawamanxeba kwanentsokolo ngenxa yendlala, ukungxwelerheka kwanemfazwe, kwanabo basakhasayo nabaphumeleleyo.
Kodwa mhlawubi ngathi kubalula ngamanye amaxesha, njengasebushushwini nasebudeni bezinye izigabaze entlangniso nalapho kungekho miqobo ithile, ngokukodwa xa bekukhe kwaphakanyiswa uluvo kwaza akwavunyelwana ngalo. Kananjalo siyazi ukuba kunjani na ukusuka ``ekwahlukaneni kwethu, ntoleyo esingayivuyela siyibhiyozele,ukuya kwinto eyahlukileyo "eyahlukileyo," kwenye kwenye, egokelela ubushushu nokugqatsa nenokudeidale "ingxabano" ebhlungu kakhulu. Loo nto ke, iqhubekilekule leki, akunjalo na.Kulula kakhulu nkuxabana komnye nonmye ize loo nto yakuqhubeka idale iintanda elusatsheni. KuFuneka sikulwe oko ukuze sijongane nentlungu siyimbumba, sifunde iziBhalo kunye, sithandaze kunye. Khumbulani kaluko emva, laa mdlalo umangaliso "Ukungqulana NeeNgeliso." Yayikhangeleka njegento eyayingena kwenzeka,eyokuba uYakobi akwazi ukuba iintsikelelo zikaThixo ebusweni buka-Esawu. Kananjalo, nakuyikhumbula impendulo yeNgelosi xa yayisezintlungwini zomzimba, yabiza intsikelelo ka Yehova, "Uyifumene unayo intsikelelo yam. Guquka uyifumane," Kwalapho, emi emva kwakhe, u-Esawu, wanikezela ngetsikelelo yo xolelwaniso.
Laa mdalalo usinika ingqiqo enzulu yeVangeli.Kuba inyaniso yile egameni nasemandleni kaYesu, amaKristu asabenza nzima, ngentembeko nangentlungu ukungena kumava naseqo ndaneni komnye nomnye umKristu ukuze abe nokufumana ufefe luka Kristu ebethelelwe emnqamlezweni.Kule nkomfa,siqalise ukubona-kwaye iye yasiguqula. Bhishophu yathi nge nye imini; "Okuthe yandenzela kona le nkomfa, kukundivula ingqondo kwanentliziyo kwiindlela zokuphila nokucinga, ngendlela engummangaliso. Kwaye kuloo nto iyonke, ndiqalisa ukubona nje kananane ukuba inkangeleko yobuso bukaKristu injani na kwiinkcubeko ezahluke ngokungenambaliso kweyam." Ukubaluleka kwesikubhaqileyo, nokuba sembindini koko sikungqule sikunye. Kuba uhlobo lomanyano ebesilufuna kule nkomfa, uhlobo lomanyano esifuna ukuluphumelelisa ngenxa yehlabathi, ayikokuba lula kokusebenza kunye ngeengqondo neengcinga ezifanayo okanye ukunkwalambisa nje kungekho nto haloo manyano lunzulu nolulolosapho noluthe lwalinga lwaza lwavavanywa ingekuko nje yintlukwano yethu nothando lwethu olunzulu kwaneentloloo-ntlobo zeemo zobome, kodwa ngokwahlukana kwethu kwanokusebenza nzima ngoku chaseneyo singqongwe luthando olunzulu olumanyanisa usapho. Uhlobo lomanyano oluqhaganyishele ligazi nothando. Igazi likaKristu laphalala emnqamlezweni ukwenzela thina,nangenxa yothando olukhulu, awathi ngoko, ngenene, wasithanela ekwiziqu ezithathu. Njengoko watshoyo uBishophu omkhulu uGlawakho kwenye yeeSekhramente zika Kristu "Ukuziphatha kusimahla kodwa akutshipu."
Kanjalo siya kuzikhumbula umbuso ubuso ngobuso de kube kudala emva kwamazwi iintetho kwanezisombululo ezithe zalibaleka. Kuba uThixo awakuthetha ehlabathini, nokwathi kwakuguqula oko, yayiyinto enkulu nkqu nakumthetho we Nkosi owawubhalwe kumacwecwe amatye. Amacwecwe amtye ayenokuninzi okungqamene neengcangula zamatye, iingxele kwanezisombululo. Ayeyimfuneko ukusigina sisekhondweni elililo. Kodwa ekugqibeleni, uThixo wasebenzisa umfziselo womatye ukufezekisa isahlulo somsebenzi kuthi sonke, phakathi kobungcwele bakhe nokusulungeka kwakhe, kunye nolwazi lesono labantu. Ngoko ke kusemntwini ngokwakhe ukuziqoqosha; omnye komnye, kwanabo basingqongileyo thina behlabathini elihlwembuzekileyo, abo basibandezelayo kuba kubo sibona ubuso bukaKristu.
Kodwa naziphina iimbandezelo eziya kolo hlobo lomanyano nesithe saziphumelela apha, azisosiphelo zona ngokwazo, njengokuba nenkomfa ingesiso isiphelo yona buqu.Kuphela iziqhamo ezilulutho zale ndibano iya kuba, ekugqibeleni, koko sibuyela nako kwi Phondo eliNgawele leBishophu. Nokuba siphumelele amadabi okuxolelanisa egameni lomthetho nokudumisa uKristu; ezi zizinikezelo esibheka nazo emva kubantu bethu, ukutya esibaphathela kona ukususela kwisidlo esineentetho esibe naso kunye nabo, ignuqu esibazele nayo, ukususela kumandla athe atyhutyha kuyo le ndibano. U-T.S. Eliot, neyathiywa ngaye ikholeji - Elioti, unento etyhulu kakhulu anga angayithetha mayela nokuhlaziywa ngokutsha kwecawa kumdlalo wakhe, "Ilitye." Kuyinto yokuba icawa kaThixo iya kuhlaziywa kuphela ize yakhiwe ngokutsha ukuba onke amalungu ayo anokusebenza kunye.
"Apho izitena zithe zawa
Siya kwakha ngelitye elitsha
Apho amaplanga abolileyo
Siya kwakha ngamaplanga amatsha
Apho ilizwi lingathethwayo
Siya kwakha ngentetho entsha
Apho kufuneka sisebenze kunye
Icawa yabo bonke abantu
Nomsebenzi kumntu ngamnye."
(Icatshulwe kwiikhorasi ze- Ilitye.)
Kwaye ngakho oko, boodade nabanakwe ababekekileyo, iluxanduva lwethu eyokusuka apha sibuyisele umva izixhobo zokwakha khonukuze sibe nokuguqula sihlaziye iicawa zethu kwiindowo esihlala kuzo, nokushumayeza bonke abantu bethu, sandlale size simisele. Kuba ukuba sibuyisela emva amaplanga abolileyo nadliwe ngumbungu kuphela wogxeko okanye inkolelo engaqinisekiswanga okanye ukuba izitena zethu ibe izizitena ezidala nezimkum-nkum nezinembono engaguqukanga; kwanokuba, ngaphe kwazo zonke, sasingavanga lizwi litsha elivela kuThixo ukuze sibe nokubuyela nalo liyintetho entsha' kubantu bethu, bekuya kuba ngenenesiwe phansi. Kodwa andikholwa nangomzuzu omnye ukuba siwe phansi. Ndikholelwa kwelokuba sifunde izinto ezininzi kumava ethu obunkokeli phantsi koxinzelelo njengoko sasimamele iintshukumo kwividiyo, zinxulumene nezifundo zethu zeBhayibhile, seva nangamabali oloyiso nenguquphantsi koxinzelelo. Ngaphezu kwako konke, ndiyakholwa ukuba sihlaziyeke ngokutsha ukuze sibange, hayi nje ukwenzela thina, koko iicawa zethu ezikwinguqu, amandla amatsha angakaKristu. Njengoko uPawulosi wabhalayo, ukuba nabani na ukuKristu, kukho udalo olutsha, konke okunye kusukela koko.
Leyo yayiyinjongo eyinyani yenkomfa yaselambethi. Imele unqumamo, iplanga eliseqongeni, apho sihlaziweyo emoyeni (emzimbeni nasenqondweni ngokunjalo, ndiyathemba) silungiselelwa isigaba esilandelayo sohambo lwethu. Iphawula isigaba ebomini bebandla lethu. Kwaye iphawula isigaba kubomi bethu ngabanye ngabanye kwiihambo zethu. Ngako oko ke, zinto zini oya kuzithabatha uzithathela isigaba esilandelayo sohambo lwakho, uhambo olubheka kwisithili seBhishophu kwanolo Phondo lwakho?
Ndiyathemba uya kuthabatha ingqalelo eyomeleleyo yokuba akuwedwa. Uyinxenye yosapho olukhulu lukaThixo, kwaye apha uye wadibana ubuso ngobuso nabanakwenu noodade bakho bavela kwihlabathi ngokubanzi njengoko sithethile, sathandaza, satya saza sanqula kunye sisondelelene silusapho. Ndithemba kananjalo ukuba woba nenqondo ehlaziyekileyo yekhonkco lomthandazo elukubophelela kubanakwakho noodade bakho kwihlabathi jikelele, nelikukhokelela kwikhoko elishushu lothando lomthandazo elinokukunika loona.
Ndiyathemba ukuba uya kumka apha unemfundiso etyebileyo kuThixo nekurhuqele ekucingeni nzulu ngoThixo. Ingqondo ebukhali ngommangaliso weVangeli noThixo ngaphambili; nangokunxulumana naye ngokulula kubudlelwane kwanothando lwakhe.
Ndiyathemba kananjalo lokuba uya kuphatha kuwe iingcinga ezintsha nezikhuthazekileyo nezimayela nabavakalisi beVangeli kwanokushunyayelwa kwayo, iingcinga ezintsha eziqokelelwe kwihlabathi ngokubanzi ngeendlela ezintsha nezahlukeneyo neziceka umngeni zokuchaza ibali likaYesu.
Ndiyathemba, ngalo lonke uthando lwale ndibano siya kubanako ukuthabatha esikuzuzileyo apha, sikuthabathele kwihlabathi kuvela kule nkomfa yaseLambethi yeshumi elinesithathu yomelezekile lumanyano lwama-Anglikheni ezibophelele kwabo babuthathaka, abahluphekayo nabagulayo ngokunzulu. Kwanga singaba ngabachasi bayo nayiphi na into ethoba isidima sobuntu kubo oodade nabanakwethu kuyo nayiphi na indawo, sivakalise amazwi ethu ngetyala lehlabathi nobuhlwempu, sithethele abantu abatsha ize sisebenzele ubu-Anglikheni obukhulayo nobomeleleyo kwihlabathi jikelele.
Kodwa okungaphezu kwakho konke, njengokuba usazi, oya kubuyela nako kwisithili esiphansi kukaBhishophu, nguwe buqu: umntu othe wanguye kwezi veki zedlulileyo. Kuba uya kukhumbula ukuba ndithe ekuqaleni, ndathi umsebenzi wethu wokuqala njenge nkomfa, ibe ukuguqula thina buqu, Ngoko ke siya kubona ntoni isithili esiphansi kweBhishophu ebusweni bakho, xa ubuyile? Baya kubona kuwe ubuqaqawuli awaye ethetha ngabo uPawulosi, ubuqaqawuli obunjengobo bukaMosisi xa wayenoThixo; ubuqaqawuli bobuso obungangqunywanga njengoko buvulekile kwilizwi likaThixo; ngaphezu kwakho konke, eliyalitha likhanya livela kulwazi elihlaziyiweyo lobunganga nokudumisa uThixo njengoko elibone bunkawu ebusweni bukaYesu Kristu.
Ndifuna ukugqibela, njengoko bendiqalile, ngoDorah, laa ntwanazana yayonakaliswe ubuso ngumlilo ngokupheleleyo, neyathi kancinane, isuntsu ngesuntsu, kubuhlungu, yonikwa ubuso obutsha. Asimlilo kuphela onokuthi wonakalise phantse ngokupheleleyo ubuhle bobuso bomntu. Ukudinwa kakhulu, amathemba atshabalalayo, imibono emfiliba, intembeko engekhoyo, ukungcoliswa ngegama, ukuphoxeka kwanokuwa phansi kwemizamo, zonke ezi zinto zingonakalisa inkangeleko yobuso bethu. Le nto ke ingaba kwaye iya kuba ngawo amava kubanye bethu, mhlawumbi kuninzi lwethu amaxesha ngamaxesha.
Kodwa njengokuba ubuso bukaDorah busaziwa nguThixo esezulwini, ubnjalo nobenu. Kwaye I-intshi nge-intshi, kancinane nakabuhlungu, obuya buso bubodwa sele ibobethu kananjalo phambi koThixo bulungiswe baza babunjwa apha kubomi bethu basemhlabeni; Ngako oko ke, boodade nanibazalwana, njengoko nilungiselela ukubuyela emakhaya nithabathise kwakhona ngomthwalo onzima osemangxni enu, khumbulani ukuba uyise wenu osemazulwini uyanazi, hayi ngamagama koko ngobuso. Kunanjalo ngenye imini, ngexesha lakhe elulunye kuye,niya kumbona, inxenye yakhe nje, njengoko kunjalo ngoku, kodwa niyakumbona "ubuso ngobuso" Kungelo themba noko kuzimisela, ithemba nokuzimisela okungekuko kwethu kuphela, koko okukokwehlabathi liphela, nokugqina ukuba sidibene apha. Kungelothemba nokuzimisela esiya kuthi sihambe siphume sivela apha siyokuxelela ihlabathi ukuba kukho uThixo osindisayo, uThixo osenyameni, owenziwe samazi ebusweni bukaYesu Kristu.
Njalo ke, sesifikelele kwixesha lokuthi ndithi salani kakuhle, ndithanda ukusebenzisa amazwi ka T. S. Eliot avela kumhobe wakhe "intlawulo yokusindisa okutshe koma" andithi hamba kakuhle kodwa ndithi hambela phambili mdadi! Ewe, ngokwenene, kwanga sonke singahambela phambili- desifike kwinkulungwane elandelayo (ezayo), kwikamva likaThixo nelilithemba lethu lokuba simdumisele ubizo oluphakamileyo nesinalo kuThixo uYesu Kristu wethu.
Kodwa uPawulosi makabe nezwi lokugqibela-loo mPostile mkhulu noncwadi yakhe inolwazi olunzulu nethe yasihluthisa kwezi veki zintathu zidlulileyo- namazwi akhe okugqibela awabhekisa kumaKorinte angamaKristu awayo, njengathi: "okokugqibela, bazalwana noodade….hlalani ngoxolo; kwaye uThixo wothando noxolo uya kuba nani! Amen. Makube njalo.
Iguqulelwe esixhoseni ngu.
M.A Ndyamara Umhla: 1999-07-16
2255 Thembisa Ext